1 Ahụhụ na-egbu egbu, ashma, na ọnọdụ iku ume.
2 Nri nri.
3 Ngwaahịa na edemede a:
4 Leaky Gut And Allergies.
5 Inye ara na ara.
7 Nje, nje na Fungii.
10 Vitamin D.
11 The ụkwara ume ọkụ.
12 Ọrịa Asma A Na-ahụkarị
13 Ebuli ogo Vitamin D gị iji gwọọ ashma.
14 Ọbụla ụzọ dị iche iche iji chekwaa ashma gị nke ọma.
15 Allergies Ma Nnu Ọgwụ (Halotherapy).
16 Puff na eriri iji nyere ashma aka:
17 Mmetụta nke inhaler nnu dị na ndị okenye nwere COPD:
18 A na-eji nnupipe eme ihe na nnọkọ ahụike ambulantị:
19 Mmetụta nke sodium chloride aerosol na akụkụ okuku ume nke ndị na-ese anwụrụ anwụrụ:
20 Mistkụhie nnu alụlụ na-enyere aka ịrịa cystic fibrosis:
21 Ọgba nnu nnu nke na-agwọ ashma:
22 Njikọ posts:
Ahụhụ na-egbu egbu, ashma, na ọnọdụ iku ume.
Na-abụkarị onye na-emejọ ihe bụ nri nri. A na - ebelata nsogbu a nke ukwuu n’aka ụmụaka ndị a na - enye nwa ara, n’agbanyeghi na a ka nwere ihe nfụkasị ahụ. N'ụdị ndị a, ọ bụ nri nne kwesịrị ịsacha. Ihe kachasị njọ nke 2 bụ mmiri ara ehi na gluten (protein dị na ọka wheat, ọka bali, rye, otis na spelt).
Ngwaahịa na edemede a:
Na-ewepụkarị nri ndị a na nri nwatakịrị ahụ, ma gbaa mbọ hụ na enyere nwatakịrị ahụ ezumike omega-3 ga-ewepu ọtụtụ ihe oke ahụ. Edekwala ọgwụ ndị ọzọ ka enyere aka belata ihe ndị dị n ’ime ụmụ ọhụrụ. Siaga Ọ nweghị ihe dịịrị ndị nọ n'afọ ndụ niile. Ọ na-akachasị mma ma ọ bụrụ na ejide ya n’ọnụ ruo ọtụtụ minit, mana enwere ike ịgwakọta ya na nri ma ọ bụ ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ. Omenala ọzọ ebe a ga-abụ ezigbo probiotic na mgbakwunye Flọ ahịa shopFreeMart.
Otu usoro ọgwụgwọ ụlọ na-ekwu na mmanụ flax na obi ụlọ na-agwọkwa allergies na mgbe ejiri ya na borage ka mma. Mkpụrụ mmanụ borage nwere acid nke akpọrọ gamma-linolenic acid (GLA). A maara GLA na-enwe mmetụta mgbochi-ọgụ. Mara mara na ọtụtụ ụlọ chiiz kacha bụ Plaster nke Paris. Jiri naanị cheese Certified Organic obi.
Otu ìgwè nke ndị nchọpụta si Finland chọpụtara na ụmụaka ndị mepụtara allergies na-erikwu mmiri ọgwụ margarine na mmiri ara ehi obere ma e jiri ya tụnyere ụmụaka na-amụtaghị ọrịa. Ọzọ, jide n'aka na bọta gị sitere na ahịhịa amị riri ma ọ bụ na ọ bụ ihe okike.
Ọmụmụ ihe a abụghị nke mbụ na-atụ aro na ụfọdụ ụdị abụba nwere ike rụọ ọrụ na mmalite nke ọrịa nfụkasị. Abụba Polyunsaturated dị ka nke ndị dị na margarine na-akwalite nguzobe nke prostaglandin E2, ihe na-akwalite mbufụt ma na-eme ka usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ hapụ protein. Cheta na butter bụ nri eke, ebe margarine bụ otu n'ime ihe kachasị njọ ị nwere ike iri.
Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na nfụkasị nri, ọ bụ naanị site na ịkpọ “whys” nke allergies nri gị ka ị nwere ike ịtụ anya idozi nsogbu ahụ. Nkpugheghari otu nri ugboro ugboro, ọkachasị n'ọtụtụ buru ibu nwere ike ịbụ ihe kpatara ya. Site na ịtụgharị nri na ilele mmeghachi omume ha, ị nwere ike bido nweta ihe ngosi nke nri na - akpata oke ahụ.
Ana m akwado mgbe ị na-aicingụ mmanya, ka ị na-agbagharị ma na-agbanwe akwụkwọ nri ndị ị na-eji na mmemme ị juụ mmanya. Ma ihe ndị ọzọ sokwa eme ka ọnụọgụ nke allergies na ogo ya. Ka anyị nyochaa ụfọdụ n’ime ha.
Leaky Gut And Allergies.
Ihe na - akpatakarị otutu nfụkasị nri, dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara allergies si kwuo, na - enwe 'leaky gut' - ụba ụbụrụ nke na - abawanye. Obere oghere nwere ike itolite n’ime eriri afọ, nke na-eme ka ụmụ irighiri ihe buru ibu nke nri mkpụrụ ndụ mebiri emebi ma ọ bụ nke na-ezughị ezu banye n’ime ọbara.
Onweghị ihe ọzọ na-abịaru nso idozi nsogbu na gọtu dị ka Flọ ahịa shopFreeMart na TinyeFreeFreeMart Mee ọ rụọ ọrụ. Shoplọ ahịaFreeMart Siaga bụkwa ezigbo nnabata maka ngwaahịa abụọ a, ọ bụghị naanị maka ịgwọ gita, kamakwa maka iwusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ọgụ.
Imeju bụ akwara dị n’ime ahụ mmadụ nke ọrụ ya bụ ịhazi ihe ndị “dị iche iche” n’arụ anyị ma mee ka “ha bụrụ enyi”. Ọ bụrụ na ọtụtụ nri na-adịghị mma nke batara n'ọbara dị oke ukwuu maka imeju na-ehicha ngwa ngwa, usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na-achọpụta ụmụ irighiri ihe ndị a dị ka ndị si mba ahụ ma mepụta ọgwụ mgbochi megide ha.
Mgbe a na-eri nri ugboro ugboro ma gafere n'ọbara ọbara ma ọ bụ na-agbari kpamkpam, ọgwụ nje ahụ na-ejikọ nri ahụ. Complexdị ihe oriri ndị a na - eri nri nwere ike isi n'ọbara banye n'akụkụ ahụ niile ebe ha kpatara nsogbu.
Inye ara na ara.
E nwere ọtụtụ ihe na-akpata ‘leaky gut’. Examplemụ ọhụrụ dịka ọmụmaatụ ka amụrụ n’ime oke nke eriri afọ karịa ụmụ okenye ma ọ bụ okenye. Yabụ, ụmụaka kwesịrị ị shouldụ naanị mmiri ara ka ha ga-eji nwayọ wepụta mmiri ara ha.
Ọ bụrụ na inye nwa ara agaghị ekwe omume, ekwesịrị iji usoro mmiri mmiri nwere mmiri dị ka “Nutramigen” makana ọ bụ nke etinyere n’ime ọrịrị dị mfe, amino acid, na obere obere mmiri ara ehi a na-asọ mmiri nke ukwuu. . Anyị ekwesịghị ịdị soy usoro. Mmiri ara ehi raw na ewu ewu yiri nnọọ na mmiri ara ehi mmadụ ma nwee ike ịbụ ndochi kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ dị.
Ihe ndị dị n’ime ahụ onye ọrịa nwere ike bute ma ọ bụ mee ka ọ na-ata ahụhụ. Ihe ndị a gụnyere erighị nri ndị na-edozi ahụ, ọrịa afọ ọria, nri nri na-adịghị mma, na allergies nri. Enwere ihe ọjọọ dị egwu metụtara ya na ihe ndị a dị n'ime ahụ ebe ọ bụ na ọnya ojoo nwere ike kpatara ha ma ọ bụ tinye aka na ogo ha.
Unigba ọgwụ mgbochi ọgwụ bụ adịghị mma maka ụmụ ọhụrụ, nke bụghị naanị na-enyere aka ịgwọ adịghị ike na mgbidi eriri afọ, kamakwa ọ na-egbochi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, nke nwekwara ike inye aka belata ọtụtụ nfụkasị.
N'ikpeazụ, mkpụrụ ndụ na-adịghị mma ndị dị na ngịga nri nwere ike ime ka imeju mmadụ na-abawanye. Ọrịa ndị a nwere ike ịgụnye nje njezo, ụkwara dị ka Candida albicans, nje ndị a na-ahụkarị dị ka “ọrịa” dị ka Salmonella ma ọ bụ ọrịa nje karịrị akarị nke a na-ewere dịka nonpathogenic, dị ka Klebsiella ma ọ bụ Pseudomonas. N'ihi ya, mkpa ọ dị ịnọgide na-enwe osisi na-emebi emebi nke ọma.
ShopFreeMart ogwu ogwu na shopFreeMart Mee ọ rụọ ọrụ bụ ihe abụọ kachasị mma ị nwere ike iji nyere aka gwọọ egbe nwere ike inyere gị aka ịkwaa ọria nke nwere afọ.
Nje, nje na Fungii.
A na-abawanye ihe ndị metụtara ịmụrụ mmadụ ụra n'ihi mgbanwe mgbanwe n'ụzọ ndụ anyị bụ nke mere kemgbe iri afọ ole na ole gara aga. Njem mba ụwa abụrụla ebe niile. Ọ bụrụ n’ị bụghị onye njem, ụwa na nje ndị ọzọ ga-abịakwute gị, nke ihe si n’ime mba na-ebubata na-eweta site na mba ndị nwere usoro ịdị ọcha.
Ihe na-akpatakarị nje na nsogbu nke funge na eriri afọ bụ oge ị orụ ọgwụ nje. Ọgwụ nje na-egbu ma nje bacteria ahụ ịchọrọ ka ha gbuo na nje ‘‘ enyi ’’ ahụ na-emetụta ya na eriri afọ. Nke a na-eme ka ebe ndị a meghee ka nje na-enweghị mmasị na-emetụta ya, yist, na nje ndị ọzọ.
Ihe ọcoụcoụ na-egbu egbu, ọgwụ mgbochi mkpali - NSAIDs - (ọgwụ aspirin, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, ọgwụ ọrịa ogbu na nkwonkwo, wdg) na-ebute ịba ụba nke eriri afọ ma nwee ike ịbawanye nsogbu nke 'leaky gut' ma na-eme ka nri ndị na-akpata nri.
A na-ere ọgwụ ndị na-alụso ọrịa ọgụ ọgụ - NSAIDs - ugbu a n'enweghị ndenye ọgwụ yana enweghị ịdọ aka ná ntị dị ukwuu banyere nsonaazụ ha. Nke a bụ ihe jọgburu onwe ya, dịka ọ na-adị mgbe ụfọdụ na - edenyeghị ọgwụ maka ọgwụ ndị a. Maka onye ọ bụla nke nwere ike ibute ọrịa afọ ọfụma, ọbụlagodi otu ọgwụ ọgwụ mgbochi mkpachapụghị anya nwere ike ịbawanye akụkụ eriri afọ.
Akwụkwọ nyocha nke dibịa na-adọ aka na ntị banyere ekwe omume nke ọbara ọgbụgba, ọnya afọ, na imegharị ahụ mgbe ị na-a drugsụ ọgwụ ọgwụ na-agwọ afọ mgbu, yana na-akọ na ọgwụ ogbu na nkwonkwo nwere ike ibute mmepe nke ọrịa afọ ọsịsọ.
N'ihi na anyị nwere ike ghara ị absorụ mmiri nri nke anyị nwere nfụkasị, yana n'ihi na nri ndị a so na -eme iwe nke eriri afọ anyị ma belata mmịpụta ọbụna n'ihu, ihe mbụ ị ga-elebara anya na ịhazi nri gị bụ ka ị ghara iri nri nke gị. dị nfụkasị.
Ọ bụrụ na ị nwere otutu allergies nri, a ga-ekpochapụ nri ndị na-emebi emebi na nri ndị ọzọ niile kwesịrị ịdị na-eri oge etiti 4 ruo ụbọchị 5 ma ọ bụ karịa. A maara nke a dị ka nri 'na-atụgharị'. Nri ntụgharị dị mkpa maka ndị nwere ọtụtụ nfụkasị n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere nri na-ezighi ezi na ọtụtụ nri, o nwere ike bụrụ na ị nwere ntakịrị ihe na-emetụta ahụ maka ọtụtụ nri ndị ọzọ ị na-eche na ọ nweghị nsogbu. Iri nri ndia n’usoro na - eme ka anyi ghara igosi ha ihe, o nwere ike inye aka chekwaa nnabata gi.
Ọtụtụ ndị nwere ihe oriri nri na-ata ahụhụ site na mgbaze nri. Nri nri ezughi oke, nke gabigara akwara a ghasasata n'ọbara bu isi ihe na - akpata nsogbu nke nza nri. ShopFreeMart ogwu ogwu na shopFreeMart Mee ọ rụọ ọrụ nwere ike inye aka gwọọ ọnya ahụ nwere ike ịpu, nke ga - egbochi nri iri na - enweghị isi ịbanye n'ọbara.
Dr. William Philpott, n'akwụkwọ ya "Mmeri karịrị Ọrịa mamịrị", na-atụ aro ntụgharị nke enzymes diges na usoro ụbọchị 4. Enwere ike mezuo nke a site na iji pancreatin (site na anụ ezi na anụ ezi), enzymes osisi (nke sitere na Aspergillus orazeae), bromelain (site na painiapulu), na papain (site na pọọpọ). Bromelain na papain na-arụ ọrụ na mgbaze naanị protein, mana ọmụmụ egosila na ha enweghị ike karịa pancreatin.
Vitamin C bụ vitamin na-emegidekarị ihe nfụkasị ahụ. Anyị na-ahụ mgbaàmà nke ihe nfụkasị ahụ ma ọ bụrụ na ihe mgbochi allergen na-egbochi mmadụ na-eme ka mkpụrụ ndụ mast tọhapụ histamine na kemịkal ndị ọzọ na-agbagha mmiri. Vitamin C na - enyere aka ime ka mkpụrụ ndụ mast si na ha nwere ike ịhapụ ịhapụ ihe ndị a.
Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere nsogbu nri na-ezere ihe ndị na-emerụ ahụ ma leba anya n'ihe kpatara nsogbu nke nfụkasị ha, dị ka nri nri, nri nri, ahụ eriri afọ, Imeju na-asachapụ na Colon Cleansing, a pụrụ imeri ihe nfụkasị ha. O nwere ike iwe oge, mana ezigbo ahụike ga-ekwe omume.
Eji ojii bụ ero ma ọ bụ yist nke tolitere na mmiri mmiri n'ụlọ dị ka mmiri ma ọ bụ mgbidi. Akpụ ahụ ga-ahapụ nsị na ikuku. Ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ ndị a ruru ngụgụ gị, ha ga-emepụta ashma na ike ọgwụgwụ dị ka ọrịa.
Iji wepu ebu, jikọta otu dropper nke Lọ ahịaFreeMart PureSilver Kwa ounce mmiri ọ bụla ị na-etinye na karama ịgba, wee fesa ya na ebu ahụ ma hapụ ya ka ọ guzo maka nkeji 10 tupu kpochapụ ya. Nka gha emebi Jehova akpụ ma eleghi anya gbochie ya itolite.
Ero na ebu na-etolitekwa n’ebe dị ọkụ, mmiri, ma nwee shuga dị ka eriri afọ ma ọ bụ ikpu. Twepụ shuga n’ihe oriri gị yana iji ọla ọcha ma nke elu ma n’ime ya nwere ike ịgwọ ndị a. Were 2 ma ọ bụ 3 droppers nke PureSilver 3 ugboro kwa ụbọchị ma tinye ya n'oge 3 ma ọ bụ 4 ugboro kwa ụbọchị, ma ọ bụrụ na achọrọ. A ga-aga n’ihu usoro ọgwụgwọ a ma ọ dịkarịa ala izu abụọ ogologo oge karịa ihe mgbaàmà dị.
Iji WaterFreeMart Hydration Hydration mgbe nile, Siaga na ShopFreeMart nye ọgwụ mgbochi nwere ike inye aka belata ihe mgbaàmà metụtara ashma na allergies.
Nchọpụta ọhụụ na-enye ihe akaebe maka njikọ dị n’etiti vitamin D na ụkọ na oke ashma. A na-ejikọkwa ọkwa vitamin D n'ọbara karịa ụmụaka 600 na ọtụtụ ihe ngosipụta nke inwere na oke ashma.
Ọ bụ ezie na ọmụmụ gara aga na-atụ aro na vitamin D nwere ike imetụta otú mkpụrụ ndụ ikuku si emeghachi omume na ọgwụgwọ na steepụ inha, a bụ ihe ọmụmụ mbụ nke vitamin D na ogo ọrịa na ụmụaka nwere ashma.
O yikarịrị ka ọ̀ ga-aga ụmụaka n'ụlọ ọgwụ vitamin D dị ala maka ọrịa ashma n'afọ gara aga, nwere ọrịa ikuku na-arị elu ma nwee ike iji karịa corticosteroids inha na-egbu egbu, ihe niile na-egosi oke ashma nwere oke. O yikarịrị ka ụmụaka ndị a nwere ọtụtụ ihe nrịbama ọrịa ọrịa, gụnyere imetọ ntụ-mite.
The ụkwara ume ọkụ.
Ọrịa Asma A Na-ahụkarị
Ebe ọ bụ na afọ ọsịsa na-akpata ashma, eziokwu ahụ bụ na enweghi vitamin D nwere ike ime ka ọnọdụ ahụ ka njọ, na-eme ka uche anyị zuo oke n'ihe anyị maara ugbu a banyere vitamin D. Dị ka Dr. Robert Heaney si kọwaa na Ajụjụ Ọmụmụ Ihe Ọhụụ nke Inner, vitamin D nwere ike ịbụ oke ike mgbochi njikwa.
Na agbanyeghi na ihe omumu a nwere ike ibu ụzọ gosipụta mkpakọrịta na-adịghị n'etiti etiti na-ekesa ogo nke vitamin D na akara nke oke ashma, ọ bụghị ọmụmụ ihe izizi gosipụtara na vitamin D nwere ike ịba uru asthmatics.
Na 2006, ndị nyocha Ọstrelia chọpụtara na ikpughe ìhè anyanwụ belatara mmepe nke mgbaàmà ọrịa ashma na ụmụ oke.
N'ime ọmụmụ ihe ọhụrụ, 28 pasent nke ụmụaka nwere ashma nwere ọkwa vitamin D nke na-erughị 30 ng (nano grammes) / ml (milli lita), nke bụ n'ụzọ doro anya ọnọdụ erughi oke. Site na mgbe ahụ anyị amatala na vitamin D nke anụ ahụ mere na-ekpughepụ maka ìhè anyanwụ dị mma karịa nri vitamin D nke ọ bụla.
Ha chọpụtara na obere vitamin D dị ala na-emetụta IgE na eosinophils mụbara, bụ ihe nrịbama ama.
Nke a nwekwara ike ịnye nkọwa maka ihe kpatara o ji dị oke mkpa ijide n'aka na a na-ebuli ọkwa vitamin D gị n’oge afọ ime, ebe ụmụ aka ụmụ nne ndị vitamin D na-enweghị nwere ihe ize ndụ dị elu nke ọrịa ashma.
Otu ọmụmụ 2007 bipụtara na Journal of Allergy na Clinical Immunology, kwuru, sị:
“E jikọtara vitamin D na sistemụ mgbochi yana ngụgụ na utero, ọmụmụ ihe anyị na-efe efe na-egosi na ị vitaminụ vitamin D dị elu nke ndị nne dị ime na-ebelata ihe ize ndụ nke ashma site na pasent 40 na ụmụaka 3 ruo 5 afọ.
½ vitaminmịpụta vitamin D zuru ezu n'oge ime nwere ike ibute mbelata nke ukwuu na ọnụnọ asthma na ụmụaka. ”
Na, Dr. Dr. Celedón kwuru n'isiokwu a:
Ihe omumu a nyekwara oria akwara aka na aru ike nke na-egosi na enweghi vitamin D nke a nwere ike ime ka o nwekwuo ike ashma, anyi na eche na inye onyinye ndi oria furu-iche nke vitamin D ka ha ghara inye aka.
Yabụ, ọ bụghị naanị na vitamin vitamin D gị n'oge ime nwere ike ịmalite mmepe nke ashma n'ime nwa gị, mana ọ bụrụ na nwa gị ezughi oke ike, ọ nwere ike ime ka ọrịa ashma ya ka njọ.
N’ezie, ụmụaka nwere vitamin D nke dị elu nwere ntakịrị ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọgwụ maka ihe ọ bụla, ọ dịkwa mkpa ka ọgwụ ndị na-alụso ọrịa ọgụ ọgụ belata. Nke a na-emetụtakwa usoro nyocha ọzọ na-adịbeghị anya nke gosipụtara ọkwa vitamin D dị elu na-ebelata oke ọnwụ n'ihe niile.
Ebuli ogo Vitamin D gị iji gwọọ ashma.
Ugbu a, nkwado a na-atụ aro kwa ụbọchị bụ nkeji 400 otu ụbọchị, nke bụ ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe ọtụtụ mmadụ chọrọ maka ahụike kachasị mma. Ikwesiri ijide n'aka na ị na-enweta ọ̀tụ̀tụ̀ ọgwụgwọ dị na mma, ị ga-achọ inweta vitamin D gị site n’ịkpachapụ akpụkpọ ahụ gị (ọ bụghị naanị aka gị na ihu gị) n’ịdị ọcha nke ọwụwa.
Marakwa na ikpughe akpụkpọ gị n’anyanwụ n’azụ windo, ma n’ụlọ gị, n’ọfịs gị, ma ọ bụ n’ụgbọala gị ga-ewedata vitamin D gị nke ọma, ebe a na-ehichapụ UVB yana UVA ga-agbadata vitamin D gị.
Can nwere ike ịgwa gị ezurula, site na anwụ ma ọ bụ akwa nke nwere tanning dị mma, mgbe akpụkpọ gị na-atụgharị ndo kachasị mma nke pink.
Ozugbo ị ruru ndò ahụ nke pink, ahụ gị agaghị emepụta vitamin D. ọzọ, n'ezie, ị ga-emebi akpụkpọ gị ma ọ bụrụ na ị ga n'ihu na-ekpughe ihe gị n'oge ahụ.
Oge kachasị mma iji kpughee onwe gị ka anwụ bụ isi ụtụtụ mgbe ụzarị ọkụ ndị ọzọ na akụkụ ma ọ bụghị iduzi ya.
Nwere ike iwepụta ihe ruru 20,000 nke vitamin D kwa ụbọchị site na ụdị ikpughe. Agbanyeghị, ịkwesighi inwe nchegbu banyere etu ị si amịpụta, ebe ọ bụ na akpụkpọ gị nwere ihe nzaghachi nke ga-emechi mmepụta vitamin D n'oge gara aga.
Nsogbu taa bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye oge ha niile n'ụlọ n'ime elekere ụbọchị.
Buru n’uche na mgbe ị na-etinye mgbakwunye vitamin D na ọnụ, nzaghachi akaghị adị ya mere ị ga-akpachara anya karịa na ịdoụbiga mmanya ókè nwere ike bụrụ ihe na-adịghị mma. Yabụ, ọ bụrụ na ị takeụ ọgwụ ọnụ, jide n'aka na ị nyochaa ọbara gị na nnwale ziri ezi. Na US, ana m akwado iji ule Diasorin ọla edo maka ịlele ọkwa vitamin D. Labcorp bụ ụzọ kwere omume maka ule ahụ.
Ọ bụrụ n ’ị na-anabataghị ụbọchị kwa ụbọchị, mgbe ahụ ị ga-ewere ọgwụ ndị dị na vitamin D ka ọ dị mkpa maka mmadụ niile. Ọ bụrụ na inwetara ọkwa gị n'ihe dị ka 60 ng / ml, enwere ike nwere ike ọ nwere ike ọ gaghị enwe mgbaàmà nke ụkwara ume ọkụ ọzọ.
Ọfụma ma ọfụma ịgwọ asịrị gị abụghị ihe dị mgbagwoju anya.
Ọbụla ụzọ dị iche iche iji chekwaa ashma gị nke ọma.
Na mgbakwunye na ijide n’aka na ị kachasị ọkwa vitamin D gị, ebe a bụ ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ nwere ike inye aka lebara mgbọrọgwụ nsogbu gị, yana ụfọdụ ole na ole nwere ike ịnye enyemaka nleghara anya.
Sachaa ikuku dị n’ime ụlọ gị. Dabere na Protectionlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchekwa Gburugburu Ebe Obibi (EPA), ikuku dị n'ime ụlọ dị okpukpu ise karịa ikuku n'èzí, na nkezi, yabụ na-atụle eziokwu ahụ ị na-etinye ihe dị ka 90 pasent nke ndụ gị n'ime ụlọ, ị nwere ike ịtụle ịwụnye ikuku dị mma. nhicha dị mfe, nchekwa, ọnụ ahịa, ma na-ahapụ ihe ndị dị ize ndụ kemịkalụ (nke na-adịkarị njọ ka mmiri ndị ị na-achọ ihicha.)
Eji m nke m ji mmiri na-enyocha ikuku. Ọ dị ka nnukwu azụ azụ, ya na mkpuchi ya na obere moto nke na-etinyere obere cone nke gbara n'ime mmiri dị na 1 / 4 nke nnukwu efere ahụ.
Onye ọ bụla na-arịa nfụkasị kwesịrị izere ncha nke nje. Na mbu ha buru ihe ojoo ma kpatara otutu akpukpo aru. Mgbe ahụ, enwere omenaala na omenaala anyị nke oge a ichegbu onwe ya banyere ịdị ọcha, karịsịa na ụmụaka. Agbanyeghị, nke a nwere ike ọgaghị enwe ahụike dịka echere na mbụ. Ọ dị ka ịbụ onye ekpughere nje na-efe efe na nje virus na-emekarị dị ka nwatakịrị nwere ike ịbụ ihe enyemaka n'inye usoro gị ihe mgbochi iji gbochie ụkwara ume ọkụ.
Dịka onye ozo na soaps kemịkal dị ize ndụ, ndị na-ehicha ihe, ihe nhicha na shampoos, ana m atụ aro ka ị nwaa ShopFreeMart NVIRO 360 Ihe Nzube Kachasị Ọcha na Akpụ na Shaa Gel. Igwe abụọ a ga-anọchi ngwaahịa nhicha ọ bụla echere n’echiche n’otu oge ị ga - echekwa ahụike gị ma nyere aka chekwa gburugburu.
Iji okirikiri 1 ma ọ bụ 2 jupụtara NVIRO Shave na Shower Gel N ’ebe ịsa ahụ dị ọkụ were ihe dị ka nkeji 30, ọ nwere ike wepụta akpịrịkpa toro ahụ n'ahụ gị nke nwere ike ime ka ọnọdụ ihe nfụkasị ọ bụla belata.
Nwee mmega ahụ oge niile na ebe kachasị mma ịmalite bụ na Mgbatị Ahụ M. Nnyocha e mere egosiwo na ndị na-ahụ maka mbara igwe na-emega ahụ mgbe niile na-egosi ọganihu na:
Ihu ikuku dị elu.
Ntinye oxygen dị ukwuu.
Ike ọrụ, na
Oke obi obi.
Dịkwuo anụ oriri sitere na omega 3 anụmanụ. Agaghị m ekwusi ike na ịdị mkpa ga-enweta oke anụ anụmanụ omega 3 dị elu na nri gị.
Ekwenyekwara m na anyị niile chọrọ abụba ome ome nke ome ome 3 na ezigbo isi mmalite maka ndị a bụ mkpụrụ hemp ma ọ bụ flax mkpụrụ. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị enweghị ikike metabolism iji gbanwee ngwa ngwa nke ALA na osisi ndị a na abụba dị elu DHA na EPA, nke nwere oke mgbochi, nke ahụ bụ ihe m na-atụ aro inweta ụfọdụ omega 3 sitere na anụ anụmanụ.
Azụ mmanụ, bụ nke na-achọsi ike na nso nso a maka ọtụtụ ndị nwere ahụ ike na-egosi ugbu a dị ka isi iyi mmanụ Omega 3 mgbe etinye ya n'ụdị capsule.
Zere ngwa ahịa mmiri ara ehi ọ bụla. Ha ama maka ime ka ashma ka njọ. Ọ bụrụ na ị na-a milkụ mmiri ara ehi ma ọlị, jiri naanị ngwaahịa mmiri ara ehi sitere na nri ehi a na-ata ahịhịa, mana yabụ kpachara anya ma leba anya ma mmiri ara ehi anaghị eme ka ashma gị ka ọ ka mma.
Rie nri nke bara ụba na vitamin E. Dị ka vitamin D, vitamin D dị elu, e jikọtara ya na nchịkọta IgE dị ala na ntakịrị oge nke allergensensiti.
Gbalịa ụfọdụ Butterbur (Petasites hybridus). Ejirila osisi a na-egbu osisi kemgbe oge ochie na-emeso ọnọdụ dị iche iche. Laa azụ na narị afọ nke 17, eji butterbur mee ihe iji gwọọ ụkwara, ụkwara ume ọkụ, na ọnya ọnya. Ndị ọrụ nyocha achọpụtala ihe dị na butterbur nke na-enyere aka belata ihe mgbaàmà nke ashma site na igbochi leukotrienes na histamine, bụ ndị na-akpata mbibi mgbaasị nke ashma.
N’otu nnyocha, 40% nke ndị ọrịa na-a aụ ebe a na-a butterụ mmiri pọpọfori enwela ike belata nri ha na-a astụ ọgwụ ashma ọdịnala.
Jiri usoro eji aru gi agha aru oru ShopFreeMart ogwu ogwu na shopFreeMart Siaga. Usoro mgbochi siri ike bụ ihe nchebe kachasị mma megide ọrịa ndị metụtara Asthma.
Halotherapy maka ashma: Ederede sitere na Ocean Plasma, nzukọ nke ebumnuche ya bụ ịmụgharị ọha na eze gbasara mkpa ịta nwanyị dị, kwuru:
A maara mkpa ọgwụgwọ Sodium Chloride nke ọma. Ejiri ya na ihe ịga nke ọma site na Amédé Latour (1830-1857) na ụkwara ume ọkụ, nke Martin Solon (1842) na Bouchardat (1851) nwere ọrịa shuga, nke Plouvier (1847) na toxemia, ụkọ ígwè na anaemia wdg. (1850), Gintrac (1850), Brugs (1851), Larière (1851), Villemin (1854), Hutchinson (1854), Moroschkin (1856), Piogh (1870) ya na oria na - efe efe, ma nokwa, buru ibu, ejiri ụlọ ọrụ ọgwụ ọgbara ọhụrụ mee ihe nwere ike ikwu na ntinye intra-venous ma ọ bụ subcutaneous injections maka ụdị nsogbu dị iche iche.
Allergies Ma Nnu Ọgwụ (Halotherapy).
Ọtụtụ ndị mmadụ ejirila nnu nnu (nke a makwaara dị ka '“akwụkwụkpa') n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ n'ime iri afọ ndị gara aga ruo ugbu a. Somefọdụ gbagara na-eku ume na nnu nnu, oke ikuku n'oké osimiri, ndị ọzọ na-aga Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ ozugbo ebe ndị ọzọ agagala ebe ndị nnu ama ama nnu dị na Poland, Austria na Romania.
Ngwọta a dị ka a ka na-achọ ya n'ihi ọgwụ mgbochi, ọgwụ nje na antifungal nke ikuku nnu nwere ikuku. Microclimate ya nnu nwere ume, na - asacha ma na - akpọghachi sel nke sistem iku ume. Ọtụtụ puku ndị kwabatara enwerela ahụ efe efe site na iku ume ikuku nnabata.
Ọ malitere na narị afọ nke 19 mgbe otu dọkịta onye Poland chọpụtara na ọ na-esikarị na ndị na-egwu nnu nwere nsogbu ọrịa iku ume. N'ime ogbunigwe ndị a, mgbaàmà nke ọrịa mbufụt dịka ashma na rhinitis nfụkasị na-enwekarị oge a napụrụghị ha, ma ọ bụrụ na ekpochapụghị ya kpamkpam.
Anyị maara taa na nnu nwere mmetụta mgbochi mkpali na nnu inha na-enye ahụ efe site na mgbaàmà iku ume. Halotherapy (ịdọrọ ikuku site na paịpụ nnu n'ime mmiri nnu) jupụtara ebe niile taa, ma nwee ike ịnye ọtụtụ uru otu ahụ.
Isi mmetụta nke nnu na sistemụ akwara bụ ịkpali izo ya ezo, na-atọghe ma nyere aka wepu viscous secretion, na-egbochi mbufụt, belata mgbakasị ahụ na-akpata ụkwara, hichaa akpụkpọ ahụ mucous na nkwekọrịta ma belata oghere akụkụ iku ume.
Ọ bụrụ na ịnwere ashma, ị nwere ike iche na ị ga-ebi ndụ steroid na ventolin inhaler, mana enwere ọgwụgwọ ọzọ maka ashma na ọnọdụ iku ume ndị ọzọ. Ntinye ọgwụ nnu, nke a maara dịka halotherapy, egosila na ọ bara uru na asthma, bronchitis na ọbụna cystic fibrosis. Enwere ike iji saltpipes, ọzọ ụdị inhaler, belata ashma ma dabara adaba maka ndị okenye na ụmụaka.
Puff na eriri iji nyere ashma aka:
E jirila nnu nnu mee ihe ọtụtụ narị afọ gburugburu ụwa iji belata ahụ erughị ala iku ume. Nnyocha metụtara ndị ọrịa asthmatic na allergy na ndị nwere ọrịa pulmonary pulmonia na-adịghị ala ala (COPD) gosipụtara nnu nnu ka mma n'ihe karịrị ọkara n'ime ha.
Ọ bụrụ na anwụrụ olulu, jupụ ite ahụ ma jiri obere okwute ma fanye ọkpọ (ọkacha mma karịa ahịhịa) ma jupụta ngụgụ n'ikike site na iku ume site na ọfụma.
Nnu m gwara bụ “ezigbo nnu” ma ọ bụ “nnu Himalayan” dị n’ụlọ ahịa ebe a na-ere nri ike ma ọ bụ na www.realsalt.com.
Nnu nke Rock, nwere ike inye olile anya ohuru maka nde mmadụ na-arịa ụkwara ume ọkụ. Bụ nnu nnu na-adọta obere irighiri nnu n'ime akpa ume, nke ndị nrụpụta kwuru na-eme ka usoro nhicha nke eke dị. Ọnwụnwa dị na Budapest chọpụtara na atọ n’ime ndị ọrịa anọ ka dịchara mma mgbe ha jisịrị ngwaọrụ maka nkeji 15 kwa ụbọchị.
Mmetụta nke inhaler nnu dị na ndị okenye nwere COPD:
Nsonaazụ na-adọrọ adọrọ nke ọmụmụ a, nke edepụtara na mbụ na Pneumologia 2007 Jul-Sep; 56 (3): 124-7 kwubiri: “A na-enye ndị ọrịa 35 nkụ nkụ wee gwa ha ka ha jiri ha ruo nkeji 30 kwa ụbọchị. Emere Spirometry ule na nkeji isii ije ije ule na mbụ na mgbe otu, ọnwa abụọ na atọ. Anyị achọtara mmụba pụtara ìhè na akara ule nyocha nkeji isii. Inye nkụ nnu inhaler nwere ike ịbụ ọgwụgwọ bara uru na COPD ka enwere ike ịnagide nnabata na ịdị mma nke ndụ. ”
A na-eji nnupipe eme ihe na nnọkọ ahụike ambulantị:
Ngalaba Na-agwọ Ọpụpụ Csepel dị na Budapest na-atụ aro ka e jiri nnu ahụepe eme ihe n'oge nnọchianya ndị ọrịa nọ n'ụlọ ọgwụ. ”Anyị na-enye ha ya ezigbo ihe ọma. Anyị na-akwado nnupipe dị na nlekọta ahụike anyị na-apụ apụ n'ihi na nsonaazụ ya dị oke mma n'ihi na ọ na-arụ ọrụ dịka ụdị ọgwụgwọ ọgwụ ọgba na-agagharị agagharị. Ihe kristal ndị dị na ya na-akwalite mgbasa nke ihe a na-eme ma mee ka ọ dị mfe iku ume.
Canmụaka nwere ike ịmalite iji ya malite mgbe ha dị afọ ga - akuziri ha etu esi eku ume ikuku site na ọkpọkọ nwere kristal nnu. N'ihi arụmọrụ ya, a na-atụ aro ka ndị na-arịa ọrịa iku ume na-ala ala, ihe na-egbu egbu na ndị na-ese anwụrụ na onye ọ bụla na-arịa nsogbu iku ume. ”
“Ahụmahụ ndị ọrịa nwere na-egosi na saltpipe na-enyere aka ịgbari akwara mmiri, na-enyere aka n’ịkwapụ ma na-eme nke a, na-eme ka iku ume ha dị mfe. Dị ka dọkịta, ahụrụ m Saltpipe dị irè, ma ọ bụ arụ ọrụ nkwado na ọgwụgwọ ndị ọrịa nwere ọrịa iku ume. ”Dr. Valria Burzuk
Mmetụta nke sodium chloride aerosol na akụkụ okuku ume nke ndị na-ese anwụrụ anwụrụ:
“Ebumnuche ahụ bụ ịmụ banyere mmetụta anwụrụ anwụrụ anwụrụ nke sodium chloride aerosol (DSCA) na akụkụ iku ume nke ndị na-ese anwụrụ ọkụ. Na ngwụsị nke ọmụmụ inhalation, 88% nke ndị na-ese anwụrụ kọrọ mfe na / ma ọ bụ belata ụkwara, mgbanwe na omume nke sputum, nke bịara doo anya. DSCA na -ebelata ihe mgbaàmà bụ isi (ụkwara na sputum), na-eme ka usoro nchebe agbachitere mpaghara na iguzogide nsị nke ndị na-ese anwụrụ n'ihi mbelata ọrụ cologic nke microgerm.
AV Chervinskaya (St. Petersburg, Russian Federation) - 2006
Akwụkwọ ọhụrụ na ọgwụgwọ dị ọnụ ala maka ịgwọ ọrịa cystic fibrosis:
“Usoro ọgwụgwọ nnu si eji saline hyperọnic nke ikuku na-abanye na ya. A na-ahụ maka ya ugboro abụọ kwa ụbọchị karịa oge dị ogologo, usoro ọgwụgwọ ahụ na-ebelata nsogbu ugboro ugboro nke ọrịa ahụ, na-eme ka ịdị mma na oge ndụ dịkwuo mma. E bipụtara nsonaazụ ikpe a na nso nso a na New England Journal of Medicine.
Nkwupụta banyere ikpe ahụ Mark kwuru, sị, “Ihe si na ule anyị pụta bụ nke nnupụisi. Anyị hụrụ ka enwekwuru oge na ọrụ nku ume, mbelata nke ọnụọgụ ọkụ akwara, belata mkpa ọgwọ ọrịa iji gwọọ ọrịa a, na ụbọchị ole na ole n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọrụ n'ihi ọrịa. ”Mkpakọrịta Prọfesọ Peter Bye site na Ngalaba Nkà Ọgwụ na Mahadum Sydney. Cystic Fibrosis na Australia 16 / Aug / 2006
Mistkụhie nnu alụlụ na-enyere aka ịrịa cystic fibrosis:
N ’ọmụmụ ahụ, a tụlere“ mmetụta nke ọgwụ nnu (HT) n’ime ndị ọrịa 124 nwere ụdị ọrịa iku ume dị iche iche. N'ime ndị ọrịa niile, ọrịa ahụ nọ na nbibi nke mgbatị ogologo. Ọnọdụ akparamaagwa nke 85% nke ndị ọrịa nwere ọrịa ụbụrụ ụbụrụ na-adịghị nwayọọ ma na-agafe agafe (BA), 75% nwere nnukwu BA, 98% na ụbụrụ na-adịghị ala ala, bronchiectasis na cystic fibrosis ka mma mgbe HT gasịrị. Nyochaa ndị ọrịa 6 na 12 ọnwa mgbe usoro HT mbụ gasịrị.
Onweghi ihe ojoo nke oria a huru site na 3d rue onwa nke 0. Ogologo oge nke mgbaghara ahụ bụ 12-7.6 m. Ọtụtụ n'ime ndị ọrịa (0.9%) enweghị ọgwụ ọ bụla ma ha achọghị ndụmọdụ gbasara ahụike. ”Alina V. Chervinskaya na Nora A. Zilber, Journal of Aerosol Medicine, 60
E gosipụtara Halotherapy (HT) na nnwale nke ụlọ ọgwụ nke nrụgide siri ike na-arịwanye elu iji nweta abamuru dị ukwuu na ọgwụgwọ nke ashma na bronchitis na-adịghị ala ala. Ọdịda nke ndị na-eme nchọpụta ahụike Western mere nyocha ya na nke ndị ọkachamara na-ahụ maka iku ume na Western iji ya mee ihe sitere na ihe dịgasị iche iche gụnyere amaghị akwụkwọ gbasara asụsụ Russia, ilekwasị anya na ọgwụ ọjọọ, yana nchekwa izugbe ọgwụ HT dị ọnụ ala karịa ọgwụ ịsọ mpi.
O nwere obere nsonaazụ ya. Enweghị akụkọ banyere mmekọrịta ya na ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ banyere mmepe nke microbial iguzogide HT. Characterdị okike ya na-amasị ndị ọrịa. Ike nke HT iji rụọ ọrụ dịka isi okwu ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa niile metụtara iku ume na-eme ka ọ baa uru. O nwekwara ikike ezughi oke dika isi iyi nke propeslaxis na ike ume maka ndị ahụ ike. ”Scienceia Press Report, Kenneth J. Dillon, Medicine-nso-nso, Washington, DC 2003.
A na-anakwere Speleotherapy, (mines ma ọ bụ ọgba) nnu ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ a ka ama ama maka ọgwụgwọ nke ọrịa ikuku na-adịghị ala ala. Ọmụmụ ihe a na-achịkọta ahụmịhe ọgwụgwọ nke karịa ndị ọrịa 4000 ndị a gwọrịrị n'oge 10 afọ n'ime ụlọ ụlọ ọgba na Tapolca, Hungary. Ọganiihu na-adịte aka na oge ọgwụgwọ na nnukwu mgbake site na ihe mgbochi ụzọ ikuku nwere ike ịhụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrịa. Ọ guzosiri ike na microclimate nke ụfọdụ ọgba nwere ike imetụta ọgba aghara ndị a n'ụzọ bara uru, mana ekwesịrị ịtụle ọgba dị ka ebe kachasị mma maka nrụpụta akụkụ iku ume. Nzukọ Ndị Ọrịa Pwa Na-ahụ Maka Pwa na Jerusalem na July 1997.
“Wieliczka, nke bụ 15 kilomita (kilomita itoolu) site na Krakow ka etinyere maka nnu na-akwụsịghị kemgbe emepechabeghị emepe. Maka euro 500 (690 dollars) nke mkpuchi mkpuchi na-ekpuchikarị, ndị ọrịa asthmatic na ndị nwere ike ị nwee ike iji ụbọchị 14 dị omimi na microclimate nke m, na-eku ume ikuku ọgwụgwọ. Oke iru mmiri na sodium chloride n'ime ebe a na-egwuputa ihe na-enyere aka mee ka nwute ọrịa mucous nke onye ọrịa, ọkachamara na-ahụ maka nku ume Marta Rzepecka.
Ọ gbakwụnyere ọgwụgwọ ahụ na 90 pasent nke ikpe, ọ gbakwụnyere. Dorota Wodnicka, dibịa na-awa mmiri, kwuru, sị: "Anyị na-ahụkwa na-akawanye mma na sistem akụkụ okuku ume." Ha enwechaghị mmetụta nke ịnya ego. O kwuru na ụmụaka ahụ na-a antibioticsụ ọgwụ nje ole na ole ma ha nwekwara mgbaàmà ole na ole, ”ka o kwuru. Liliana Prishchepa nke Russia kwuru na ọ wetara nwa nwa ya si Moscow na Wieliczka na ndụmọdụ otu enyi si Ukraine onye a na-emeso ebe a. Prishchepa kwuru, sị, “Nsogbu ya kwụsịrị mgbe naanị nleta abụọ gasịrị. Nnu nke Underlọ Ọrụ Ahụ Ike Ala Dị n'okpuru, Elise Menand AFP 22 July 2007
Ọgba nnu nnu nke na-agwọ ashma:
“Abụ m onye ọrịa asthmatic ma gaa maka ọgwụgwọ ọgwụgwọ" gaa na “Troilus nke m, na Tirgu Ocna nke dị nso Slanic Moldova, Romania. N'ime ndị 5000 ka a gwọrọ n’ime ebe a n’afọ gara aga naanị. O juru ndi Romania anya na ‘salinas’ no na Britain. Agbanyeghị na ọnụnọ ụkwara m, sinusitis na ụkwara ume ọkụ adịghị ọcha mgbe m rutere n'ụlọ, ihe niile kpochapụrụ ka ọnwa abụọ gasị, enwere m ike ịgba egwu n'agbamakwụkwọ nwa anyị nwanyị. Akwụkwọ ndị ahụ na-egosi na 'speleo-reaction' na-aputa ihe ka n'ọnụ ọgụgụ mmadụ, ọ na-eyi ka ọ kara njọ tupu ha agbake. ”Sylvia P. Beamon, MA. 1997
“Lelọ ọrụ ikuku,“ ikuku ọgwụ ”nke na-eme ka ikuku na-anyụ anyụ, na-ekunye ụmụ nnu n'ime ikuku ka m na-azedụ. Elekere atọ n'ime elekere anya ọnụnọ ya “ra ka ụbọchị atọ n'oké osimiri", o doro anya, na ayodiin, bromine, magnesium, potassium na mineral ndị ọzọ kwuru na ha nwere ihe ndị na-egbu nje na ọgwụ nje. Ọ bụ ezie na teknụzụ ahụ erughị afọ 10, mmụọ sitere na nchoputa nke 19 nke narị afọ gosiri na ndị na-egwu nnu na Poland nwere nsogbu pulmonary dị ala karịa ndị ọzọ.
Mgbe ahụ, na oge 1990s post-komunizim, ndị ọkà mmụta sayensị na Poland malitere inyocha ohere nke ịghaghachi ugwu ndị yiri obere ugwu dị n'elu ala, nke a bụ mgbe ha nwetara ọkwa plọg nnu ndị a, ihu ọkụ na, kachasị mkpa, ikuku ikuku. Oké nnu eburula Europe na mmiri; enwere 200 ugbu a na Poland naanị ”Oge nkeji nke 45 na-efu £ 15. Victoria Finlay, Telegraph, 17 Sep 2007
O nwekwara ike ịbụ ihe kpatara mgbaàmà iku ume. E kwesịrị izere nnu table mgbe niile. Nnu m na-akwado bụ “ezigbo nnu” ma ọ bụ “nnu Himalaya” dị n’ụlọ ahịa nri dị n’obodo unu ma ọ bụ www.realsalt.com.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara otu esi eji ya: (Lee Nnu)
Maka isi okwu ndị ọzọ dị mkpa metụtara ashma na allergies, lee ihe omume iku ume na Colon Cleansing na Centonite Clay.
Mmiri ara ehi ara - Egwuregwu Azụ Greenwich Chicken Tamales
N'ihe iwe: NFL Player Demetrius Harris Hicles Allergies Ma na Ubi ma Gbanyụọ
Milk Allergy Alert - Ahịa nri Vodka n'ihu
Ale Soy Allergy Alert - Oge Ahịa Ahịa A Na - Nweta Gaa Na Nri Go Laserna w / Gluten
Ihe na ụkwara ume ọkụ, Mmekorita, Anti Fungal, Nwa Ewu, Nwa Ewu, Ike ọgwụgwụ, Colon Cleansing, nri, Imeju nhicha, Nsogbu iku ume, Yistakpado ọrịa nfụkasị, allergies, ụkwara ume ọkụ, eme egwuregwu \_, nkpuru nkpuru, inye ara na ara, ike iku ume, colon ọcha, dr celedon, nri allergies, gamma linolenic acid, GLA, ọgwụ mgbochi mkpali, nsawo, nsogbu iku ume, ihe oriri na-edozi ahụ, Freelọ ahịa ọgwụ ọta akara, Flọ ọgwụFreeMart bụ ọgwụ dị mma maka ụmụ ọhụrụ, vitamin d, vitamin d na ashma, vitamin d na elele, nri vitamin d
Eziokwu Banyere Acids Na Mmetụta Alkalis Na Ahụike
Ọgwụgwọ Maka Ọrịa Acne
7 echiche on "Ahụhụ na-egbu egbu, ashma, na ọnọdụ iku ume"
Pingback: Hay Fever Triggers - Nkọwa Ahụike Dị Mma
Pingback: ShopFreeMart Siaga - Okike Nkọwapụta Ahụike
Pingback: Ọgwụ Ndị E Nwere Ike Maka Ọrịa Ọrịa
Pingback: Ngwọta Ahụike Dị Ọrịa Maka Ọrịa Autoimmune - Ọkọwa Ahụike Dị Mma
Pingback: Nkụ Allergy Alert - Samurai Furikake Popcorn 5oz. Ihe ngwugwu
Pingback: Aleat Allergy Alert - Green Meadows Premium Meat Cuts Savory Chicken Boti Kebab
Pingback: Maka acupuncture Maka ashma - Eziokwu ka ọ bụ akụkọ ifo?
Ihe Nchọpụta AZ Họrọ Atiya Ezigbo Acid / alkaline Acid Reflux Acids na Alkalis Ihe otutu Isotretinoin ọgwụ ọjọọ Ọkpụkpụ Acne Actinic Keratosis rụọ ọrụ Acupressure Acupressure Maka ụkwara ume ọkụ igba okpukpu Ọgwụ acupuncture Maka ashma Ịṅụ ọgwụ ọjọọ Adrenal Glands Ọgbọ Afọ Ọrịa Rhinitis Mmekorita Alzheimers '/ Dementia Aria / oria Iwe Ntughari Ant Agụ Agadi Ọgwụ nje Anti Fungal Mpempe mgbochi Ọrịa mgbochi Ọgwụ nje antioxidants nchegbu Appendicitis Odide Ntụkwasị aromatherapy Ọrịa akwara ogbu na nkwonkwo Asbestosis Ọrịa Aspartame Aspartame Nutrasweet Alert ụkwara ume ọkụ Kwụ Onye Ọga Ọrịa Na-eme Onwe Gị Azụ Mgbu Nje bacteria Ihe nje Ihu ojoo Ihe ndina Nwa Ewu Nwa Ewu Inu Ọria ọbara Circulation Isi Oduu Isi Oduu Obụpde ọkpụkpụ Elsta Ọrịa afọ Burns cancer Candida Canker Sores Ọrịa obi Cataracts Cavities Ekwentị mkpanaaka Treatmentzọ Ọgwụgwọ Cellulite Chafing Kịtịkpa cholesterol Ike ọgwụgwụ Oyi / Oyi Ọkụ Na-egbu Ahụ Ọrịa colitis Collagen Silver Coloidal Colloidal Silver na Flu Colloidal Silver na Nje Virus Colloidal ọlaọcha Maka anu ulo Colon Cleansing mkpọchi ntachi COPD - Ọrịa Pulmonary Ọrịa na-ala ala Coronavirus Ahụ ụkwara Covid19 Ọrịa Crohn Acystic Acne Cysts Ọchịchị gbara agba gbara anya Nkwenye Ahụ ọkụ Dengue Ụkwụ ịda mbà n'obi Diabetes Diaper Rash afọ ọsịsa nri Diverticulitis Drugs Ọrịa Ọrịa na-amalite ED Edema EMF Ndị na-akpata ọgba aghara Endocrine Endometriosis Akwụkwụ na-adọ Ọrịa Epstein-Barr Erectile Dysfunction Mmanụ dị mkpa Anya Anya Anya Anya Anya Anya anya Anya - Mbelata nku anya Anya - Iweghachi Anya Ndị ama ama Ọdọ abụba Ahụ ọkụ Fibroids Fibromyalgia Azụ Ahụ Azụ Fleas Mmiri Flu And Colloidal Silver Fluoride / Fluorosis Nri nri Ajụjụ Erimeri Nri Nri Nri Ka I Zere Odkwụ Odor / Ọkpụ ụkwụ Mkpochasị akwụkwọ / ihe ịchọ mma Radicals n'efu mkpụrụ Gall Bladder Nkume Gall Gas / Gastritis Genital Herpes Gingivitis Glands Nri GMO Gout Ọrịa ili Hair Agba ntutu / Agba Halitosis Hay fever isi ọwụwa Ugbo ala ndi aru ike Ọrịa Obi Ọkụ obi nro ịba ọcha n'anya Ọgwụ Ọgwụ herbs herpes Mmeghachi azụ nke Herxheimer HIV Golọ Gout Remedies Homeopathy Hormones Nje Virus Papilloma nke mmadụ (HPV) Mmiri Hydration Mmiri ọbara mgbali Hyperthyroidism Hypnotism Modulator anwụ Monde Mmetụta impetigo Nri mbufụt ehighị ụra nke ọma Ibe Ígwé Ọrịa Bowel na-adịghị mma Itching (Pruritus) Jock Itch Mkpakọrịta Keratosis Ketogenic Diet Ọcha akụrụ Akụrụ Ọrịa Ckwụ .kwụ Leishmaniasis Nri Lemọn Nri Lemọn Ọrịa Umeji Imeju nhicha Mgbaafọ Ọrịa Imeju Ọrịa Umeji Nri Lupus Ọrịa Lyme Igwe Ọdụdọ na ịba ịhịa aka n'ahụ Isonnyịnya Mercury Mesothelioma Obere Microwave Migraine Mobile ekwentị mkpanaaka na Mononucleosis Nappy Rash Ngwọta Obi & Ọgwụ Ọgwụ - A to E Ngwọta Obi & Ọgwụ Ọrịa - G ka L Ngwọta Obi & Ọgwụ Ọgwụ - M ruo S Eke Ogwurugwu & Ulo Ogwurugwu T to Z Ọgwụ Ahụike Dịịrị Maka Isi Ọwụwa Ọgwụ Ahụike Maka Migraines Osteoarthritis Ahụhụ ahuekere Peripheral Edema Pitting Edema Ọbara Ọbara adịghị Nrụgide Ọ na-akpata Nrụgide Ulcers Ọcha ọcha Ezi ntụziaka Nsogbu iku ume Rheumatism Arthritis Rheumatoid Roman Chamomile Mkpa mmanụ ọdịdọ Ngwaahịa SFM SFM ọla edo ọcha SFM Siaga Skin Ugbo ala Solfoggio Ọrịa ime mmụọ nchegbu Iri imi Ịwa ahụ ọzịza ezé Akara Ire ere Ogbu na nkwonkwo ụkwụ Ifufe Na-agbada Tumor Uncategorized Fibroids Uterine malitere ịrịa Nje Virus mmiri ibu Loss Achịcha ọka WiFi Na-echegbu onwe gị Ogbugbu Yist
Hypnotize Wepụ Allergies gị
EGO NA-EGO NA-AGBALI N'IME HYPNOSIS !!
Usoro uche ji alụso ọrịa ọgụ nwere ike imetụta nke ukwuu n’onwe anyị, a na-eche na ọtụtụ mmeghachi omume nfụkasị ahụ nwere ike ịnwe mmetụta uche gbasara mmụọ.
Cheedị ihe obi ga-adị gị ma ọ bụrụ na ịchọghịzi ịma ifuru nke ụla mmiri, ma ọ bụ ịbanye n'ụlọ nwere nkịta ma ọ bụ nwamba, ma ọ bụ ọbụna nwee ike inye gị nri ụfọdụ.
Ee, Achọrọ m Ihe Ahụhụ Allergy - UGBU A!